Baolina kitra - CHAN 2020 :: Naverina ho isan’ny Barea hiatrika an’i Namibia i Santatra • AoRaha
Baolina kitra – CHAN 2020 Naverina ho isan’ny Barea hiatrika an’i Namibia i Santatra
Niova tampoka ny lisitra. Isan’ireo mpilalao tsy voa­safidy hiatrika ny lalao miverina amin’i Namibia ao ana­tin’ny dingana fifanin­tsanana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika na ny CHAN 2020 i Santatra, taorian’ny lalao tsapa farany.
Hilalao amin’io fifandonana amin’ny sabotsy 19 oktobra 2019 io anefa izy noho ny faharatran’i Tsilavina tamin’ ny fanazarantena farany.
“Mankany amin’ny fampi­diram-baolina hatrany no hamafisina amin’ny ekipa malagasy. Izany no antony nisafidianan’ny ekipan’ny teknisiana an’i Santatra”, hoy Andriamanarivo Franklin, mpanazatra ny Barea.
Hanainga rahampitso maraina ny ekipam-pirenena malagasy. Tafiditra ao anatin’ ny tsy handeha any Nambia ihany koa ny mpiandry tsato-kazo Randrianasolo Jean Dieudonné na i Leda.
“Nanana olana manokana i Leda ka tsy afaka nanaraka ny fampivondronana. Izay tsy fahatongavany izay no nahatonga azy tsy ao ana­tin’ ny lisitra”, hoy i Jean François Debon, ao anatin’ny ekipan’ ny teknisiana.
Manana tombony ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny lafiny fiarovan-tena, raha ny fanazavan’ny mpana­zatra nasionaly. « Afa-po aho tamin’ny fanomanana. Tombony ho an’ireo mpilalao malagasy ireo ny fiarovan-tena », hoy Andriamanarivo Franklin, mpanazatra ny Barea. Nilaza ihany koa ity tekni­siana ity fa: « manafika kokoa no tanjak’ ireo Namibianina. Izany no antony nanamafi­sana ny fiaro­van-tena tato amin’ny ekipa malagasy ». Nohamafisin’ny ekipa malagasy faramparany ihany koa ny fampidiram-baolina faran’izay haingana. Hitan’ny mpanazatra fa hahazoana ny fandresena ny fampidirana baolina voalohany, indrindra noho ilay isa tokana efa azo tamin’ny lalao mandroso.